बिपिन कार्की सवारी दुर्घटनामा, खुट्टाको अपरेसन गर्ने तयारी हुँदै – Mero Film
बिपिन कार्की सवारी दुर्घटनामा, खुट्टाको अपरेसन गर्ने तयारी हुँदै
सवारी दुर्घटनामा परेका अभिनेता विपिन कार्कीको दाहिने नलिखुट्टाको हड्डी क्र्याक भएको छ । हाल उनलाई बयोधा अस्पतालको पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा राखिएको छ । उनको खुट्टाको हड्डीको क्रयाक जोड्नका लागि अपरेसन गरेर स्टिल हाल्ने तयारीमा उपचारमा संलग्न डाक्टरको टिम लागेको छ । उनलाई केही समय पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा राखेर अनि खुट्टाको अपरेसन गरिनेछ ।
फिल्म ‘जात्रै जात्रा’को छायांकन स्थलमा जाँदै गर्दा कार्कीलाई मंगलवार बिहान कालिमाटीमा मोटरसाइकलले ठक्कर दिएर फरार भएको थियो । ठक्कर दिने व्यक्तिको पहिचान नजिक पुगेको फिल्मका निर्देशक प्रदिप भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
विपिन दुर्घटनामा परेसंगै फिल्मको छायांकन प्रभावित बनेको छ । कुल ३५ दिनको सुटिङ सेड्युल रहेको फिल्मको १० दिनको छायांकन सकिएको छ । अझै २५ दिनको सुटिङ सेड्युल बाँकी रहँदा विपिनको दुर्घटनाले फिल्मको छायांकन रोकिने सम्भावना देखिएको छ ।
२०७५ मंसिर ४ गते १३:२३ मा प्रकाशित
बिपी कोइरालासँगै जागरण गीत गाउने योद्धाको निधन
सञ्जीव सिंहले सार्वजनिक गरे ‘तारेमाम’
“युगदेखी युगसम्म श्रद्धेय नारायण गोपाल”
‘पठान’ को छायांकन सुरु, शाहरुख खान स्टुडियो बाहिर देखा परे
स्वस्तिमाको खुशी सफलताले कि रंगले ?
भिडियो खेल्न सरकारले अनुमती दिएको हो र ?
देओल परिवार फेरि ठूलो पर्दामा देखा पर्ने, धर्मेन्द्रले गरे ‘अपने-२’ सीक्वलको घोषणा